तपाईको डोमेनको स्वामित्व छ! | Martech Zone
तपाईको डोमेनको स्वामित्व छ!
सोमबार, जनवरी 8, 2007 मङ्गलबार, अप्रिल 5, 2016 Douglas Karr
को नयाँ सुविधाहरु मध्ये एक ब्लगर त्यो हो कि तपाईं आफ्नो डोमेनमा अनुप्रयोग होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। (मैले याद गरे कि उनीहरूले नयाँ प्लेटफर्ममा तपाईंको गुगल खाता लगइन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गर्दछ। यो राम्रो छ)। WordPress तपाईंको ब्लग होस्ट गर्न प्रस्ताव गर्‍यो, तपाईंको थिम अनुकूलित गर्दै, प्लगइनहरू थप्दै, आदि। केही समयको लागि। म विश्वास गर्दछु कि यो मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो किन मैले वर्डप्रेस छनौट गर्‍यो ... म आफ्नो डोमेनको स्वामित्व लिन चाहान्छु।
तपाईंको ब्लग सुरु गर्न र यसलाई धेरै प्लेटफर्महरूमा एकमा चलाउँदा समस्या भयो। vox, टाइपपेड, ब्लगरवा WordPress, के त्यो तपाईंको ट्राफिकको हो, तपाईं होइन। तपाईं तिनीहरूको सर्भरहरूमा निर्भर हुनुहुन्छ, तिनीहरूको प्लेटफर्म परिवर्तनहरू, तिनीहरूको डाउनटाइम, सबै कुरा! केवल तपाईको 'स्वामित्व' तपाईको आवाज हो।
यदि तपाईं त्यहाँ बाहिर एक जर्नल राख्न चाहानुहुन्छ भने यो कुनै ठूलो मुद्दा होइन। तर सडकमा आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्दै र तपाईं ब्लगिंगको बारेमा गम्भीर बन्न चाहानुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्दै, सायद केही विज्ञापन आदि प्राप्त गर्नुहोस्, र के अनुमान गर्नुहुन्छ? तपाईं अडिनुभयो ... सबै प्रमुख खोजी ईन्जिनहरूमा अब तपाईंको आवाज (सामग्री) अरू कसैको वेबसाइटमा अनुक्रमित छ। यसको मतलब तिनीहरू ट्राफिकको स्वामित्व राख्छन्, तपाईं होइन।
र यदि तिनीहरू बेली जान्छन् भने के हुन्छ? के हुन्छ यदि तिनीहरूको सर्भर प्रदर्शन वा सफ्टवेयर यति सहज रूपमा डरलाग्दो भयो कि तपाईंले तिनीहरूलाई छोड्नु पर्छ। भाग्यवस, तपाईं आफ्नो पोष्टहरू लिन सक्नुहुनेछ तर, दुर्भाग्यवस, तपाईं आफ्नो खोजी इन्जिन अनुक्रमणिका लिन सक्नुहुन्न। त्यो हप्ता र महीना को लागी पछाडि सेट गर्न सक्दछ जब तपाइँ तपाइँको साइट मा अनुक्रमणिका गर्न को लागी सबैलाई पर्खनुहुन्छ र तिनिहरुका साइटहरुमा सबै सन्दर्भहरु अपडेट गर्दछ। यस सप्ताहअन्तमा, मैले मेरो साइटलाई अर्को खातामा सारिदें, र मेरो सबै लिंकहरू र खोज परिणामहरू पहिले जस्तो काम गरिरहेछन्। म स्थायी लिंक संरचना को उपयोग गर्न को सिफारिश गर्दछ ताकि यदि तपाईं एक फरक प्लेटफर्ममा लाग्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो लिंक संरचना कायम गर्न सक्नुहुन्छ।
नयाँ ब्ल्गरहरूलाई मेरो सल्लाह?
तपाईंको ब्लग डोमेनको स्वामित्व छ! तपाईंको 'टेक्निक' लाई तपाईंको लागि दर्ता पनि नगर्नुहोस्। तपाईंले यसको स्वामित्व लिनु पर्छ, तपाईंले यसलाई नविकरण गर्नु आवश्यक छ, तपाईंले यसलाई ट्र्याक राख्नु पर्छ। डोमेनको स्वामित्व भनेको तपाईको सडक ठेगानाको स्वामित्व पाउनु जस्तै हो, तपाई त्यो घर जग्गा कसैको नाममा राख्नु हुन्छ? तपाईं आफ्नो व्यापार वा तपाईंको ब्लगको साथ किन त्यसो गर्नुहुन्छ?
ब्लगिंग प्लेटफार्महरु को लागी मेरो सल्लाह?
नाम सर्वर सेवाहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्। यसले मलाई मेरो मनपर्ने रजिस्ट्रारको साथ डोमेन नाम दर्ता गर्न अनुमति दिनेछ, तर मेरो नाम सर्वर तपाईंको साइटमा देखाउनुहोस्। यदि मैले मेरो ब्लग वा साइटलाई अर्को होस्टमा सार्न निर्णय गरेँ भने, म केवल मेरो साइट सार्न सक्छु र मेरो नाम सर्भर अपडेट गर्दछु। यो 'प्रति प्रयोग भुक्तानी' मोडेल पनि हुन सक्दछ। म डोमेन नाम रेजिष्ट्रेसन सेवाहरू वेवास्ता गर्दछु किनकि तिनीहरू बटमा पीडा हुन सक्छ र तपाईले आफ्नो साइटमा सबै प्रकारका समर्थन र एकीकरण थप्न चाहानुहुन्छ। तर एक डोमेन नेम सर्भर छ जसले http://mydomain.com लाई http://mydomain.theirdomain.com लाई दर्साउँछ एकदम सरल छ।
टैग: डोमेनडोमेन नामतपाईको डोमेन नामको स्वामित्व राख्नुहोस्
WordPress: ब्याकअप र अर्को सर्भरमा पुनर्स्थापना
प्रत्यक्ष मेल जुन काम गर्दछ!
जनवरी 9, 2007 मा 8: 59 एएम
म पूर्ण रूपमा सहमत छु, डग्लस। किन सामग्रीको नियन्त्रण हस्तान्तरण तपाईं अरू कसैलाई सिर्जना गरिएको हो?
मलाई याद छ जब मैले मेरो पहिलो डोमेनको लागि $ pay२ तिर्नुपर्‍यो, तर यी दिनहरूको लागत वास्तवमै तपाईंको आफ्नै डोमेन प्राप्त गर्नका लागि एक कारण होईन। र अझै धेरै रचनात्मक नामहरू उपलब्ध छन्। (र ती डाईहरू केवल मेरो एक दिउँसो अनुसन्धानबाट ...)।
बिल्कुल फरक नोटमा, किनकि तपाईं ब्लगिging प्लेटफर्म प्रदायकहरूको लागि व्यवसाय मोडेल उल्लेख गर्नुहुन्छ; मैले सँधै सोच्दछु: कसरी वर्डप्रेसले पैसा कमाउँछ? के यो केवल दान हो, र के त्यसले वास्तवमा काम गर्दछ?
म यस तथ्यबाट चकित छु कि विकीपीडियाको मालिकले उनीहरूको साइटमा ब्यानर विज्ञापन गर्न अस्वीकार गरे। आदर!
जनवरी १, २०१9१२::2007 अपराह्न
म एक डोमेन नाम प्राप्त गर्न ढिला हुने समस्यामा आएको छु। मैले मेरो डोमेन नाम किनिएको कारण म अधिक प्रयोग गर्न चाहन्थें। यद्यपि, मलाई चालको पीडा महसुस भयो।
जनवरी 14, 2007 मा 11: 30 एएम
त्यहाँ एक शानदार छ चेतना को शार्ड मा पोस्ट तपाईंको वर्डप्रेस ब्ल्गलाई यो आफ्नै डोमेनमा सार्नका लागि चरणहरू पाउनुहोस्!
जनवरी 15, 2007 मा 11: 59 एएम
मेरो पोष्ट, डगलाई सन्दर्भित गर्नु भएकोमा धन्यवाद। म यसको कदर गर्छु
म सकेसम्म छिटो नै तपाईंको डोमेनको स्वामित्वको बारेमा पूर्ण सहमतिमा छु यदि ब्लगि ofको सुरूवातबाट सहि छैन भने। तपाईं आफैले धेरै विकल्पहरू खोल्नुहुन्छ। र चीजहरू बढ्न थाल्छन्। तपाईलाई यो मनपर्दछ कि भनेर हेर्नको लागि तपाईले सुरूवात गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसैले अरू कसैको प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहोस्। तर यदि तपाइँले यो मनपराउनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो र थप स्वतन्त्रता चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफैंको लागि धेरै काम निम्तो गर्नुभयो र अन्य परिणामहरू जुन तपाईंले कुरा गर्नुभयो।